လူတစ်ယောက်ကိုဘာပေးရမလဲ။ နည်းပညာ၊ ဖက်ရှင်နဲ့တခြားအရာတွေအတွက်အကြံဥာဏ်တွေ။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
လူတစ်ယောက်ကိုဘာပေးရမလဲ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုရှာဖွေရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူရသည်။ အခြားသူများက, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ခေါင်းစဉ်မည်မျှသောက်ပါစေ၊ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်မရှိပါ.
သင်လက်ဆောင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်ပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်အတွေးအခေါ်များစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နည်းပညာ၊ ဖက်ရှင်၊ အိမ်နှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများ ... ထိုလူအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်မည့်ရှည်လျားသောစာရင်းများ။
3 Artículosမသန်စွမ်း el hogar
4 စာအုပ်များ၊ တေးဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်
နည်းပညာများကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း၏အဓိကအားသာချက်မှာမည်သူမျှမခုခံနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝကျကျ၊ ၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာဆောင်းပါးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ဤကိရိယာသည်အသုံး ၀ င်သောအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်သိသောအရာများနှင့်သင့်အားစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများကိုကောင်းကောင်းပေးသောသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသူများကိုလောင်းကစားပါ။
ဤတွင်ယောက်ျားများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောလက်ဆောင်အကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။ အကွာအဝေးအလွန်ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကျဉ်းမြောင်းဖို့ကြိုးစားရန်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်လက်ခံသူ၏စရိုက်နှင့်ဝါသနာများကိုအကဲဖြတ်သည်:
အဝတ်အစားသည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်မကစားပါနှင့်၊ မည်သည့်ပုံစံနှင့်အသက်အရွယ်ပင်ဖြစ်ပါစေလူတိုင်းသည်သူတို့၏ဗီရိုအတွင်းရှိဂန္ထဝင်အပိုင်းအစများလိုအပ်သည် အပြာရောင်ကော်လာသို့မဟုတ်ရေတပ်အပြာရောင်ပါသောရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်.
မင်းနေ့စဉ်ဝတ်စုံဝတ်ရင်၊ အိတ်ဆောင်ရင်ပြင်နှင့်ဆက်ဆံမှု သူတို့သည်သင့်ကိုအမှတ်အသားပြုရန်ကူညီလိမ့်မည်။ လူတစ် ဦး အားပေးရမည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားသောအခါသူတို့စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာများ၌အမြဲရှိနေသည်မှာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ။ အဝတ်အစားများကဲ့သို့အပိုပစ္စည်းများကို ၀ ယ်လျှင်အရောင်များ၊ အရောင်အသွေးစုံသည့်အရောင်၊ အရောင်အသွေးစုံသည့်အရောင်အသွေးစသည့်ရောင်စုံအရောင်များကိုရွေးချယ်ရန်အဆင်ပြေကြောင်းသတိရပါ။
သင်တစ်နှစ်တာ၏အချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သော်လည်း, ပဝါနှင့်လက်အိတ်လည်းအလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုချက်ချင်းမသုံးနိုင်ပါကလက်ဆောင်သည်ယင်း၏ကျက်သရေကိုပျောက်စေသည်။ သဘာဝကျကျခြွင်းချက်ရှိပါတယ်; ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်များနှင့်လေကြောင်းလိုင်းဥပမာ။
ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးအဆောင်များသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအားပေးကမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပခုံးအိတ်များ၊ ကျောပိုးအိတ်များ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများ။ ဤအမှု၌ရှာဖွေရန်အရည်အသွေးကြော့ရှင်းသည်။ အနက်ရောင်၊ သားရေနှင့်သန့်ရှင်းသောမျဉ်းကြောင်းများကိုစဉ်းစားပါ။ Timeless အရာအားလုံးနှင့်အတူကောင်းစွာသွားလေ့ရှိတယ်။ ထိုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်ခေတ်မှီသောလက်ဆောင်တစ်ခုရရှိရန်အတိုဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Artículosမသန်စွမ်း el hogar
ရေရှည်တွင်အသုံး ၀ င်သောလက်ဆောင်များသည်တန်ဖိုးထားခံရပြီးအိမ်သို့ရောက်သောအခါရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဖန်ထည်ပစ္စည်းများ (ဝိုင်ခွက်များ၊ ဝီစကီ decanter နှင့်၎င်း၏မျက်မှန်) ကော်ဖီဖျော်စက်ကဲ့သို့သောသေးငယ်သောစက်ကိရိယာများအတွက်ကောင်းသောစပျစ်ရည်သို့မဟုတ် Scotch ပုလင်းသို့။
အဘယ်ကြောင့်အလှဆင်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုသည်မဟုတ်လော အိမ်တိုင်းတွင်နေရာလွတ်ရှိသည် မြေတပြင်လုံးအတန်းအစားဖြည့်စွက်တဲ့ပန်းချီကားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ဆောင်ကိုအလှဆင်ခြင်းအပြင်အိမ်တွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လိုပါကအနံ့အရသာရှိသောဖယောင်းတိုင်များကိုစဉ်းစားပါ။ သာယာသောအနံ့၏စွမ်းအားကိုဘယ်တော့မျှလျှော့မတွက်ပါနှင့်။
စာအုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၊ လုံခြုံစွာလောင်းကစားသည်သင်အကြိုက်ဆုံးစာရေးသူ၏နောက်ဆုံးဝတ္ထုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဝထ္ထုဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ကျန်းမာရေးစာအုပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ် ၀ တ္ထုပေါ် မူတည်၍ လည်းကြီးသောလက်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
တေးဂီတစီဒီသို့မဟုတ်ဗီနိုင်းသည်လက်ဆောင်များစွာပြုလုပ်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစား သူ idolizes တော်မူသောအနုပညာရှင်၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ် သို့မဟုတ်ဒဏ္coာရီဆန်သောအယ်လ်ဘမ်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်အမျိုးအစားများအထက်တွင်ရှိခဲ့သည့်နှင့်မည်သည့်ဒစ္စကိုမှမှမရှိသော ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - သင်အကြိုက်ဆုံးဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်သရုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမရ၊ သင့်စုဆောင်းမှုတွင်သင်မရှိသေးသော DVD သို့မဟုတ် Blu Ray ရှိရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Braun စီးရီး 9
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်ဆောင်တစ်ခုမှားယွင်းစွာသွားရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ moisturizer အစုံ (သို့) မွှေးတစ်ပုလင်းကိုစဉ်းစားပါ။ မျက်နှာဆံပင်သည်သင်၏ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါက၊ မုတ်ဆိတ်စောင့်ရှောက်မှုကိရိယာအစုံ သငျသညျအစဉ်အမြဲအပြစ်ကင်းစင်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့။
သို့သော်အဘယ်သူမျှမအဆုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်အခြားယောက်ျားရဲ့ဖြီးလိမ်းပုံလက်ဆောင်:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » လူတစ်ယောက်ကိုဘာပေးရမလဲ